ပရိတ်သတ်တွေဆီ အမှတ်တရလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ အင်္ကျီလေးကို မီးပုံပျံကြီးနဲ့အတူ လွှတ်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော် မူးလာ…… – Cele Oscar
ပရိတ်သတ်တွေဆီ အမှတ်တရလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ အင်္ကျီလေးကို မီးပုံပျံကြီးနဲ့အတူ လွှတ်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော် မူးလာ……
October 22, 2021 By L YC Celebrity
ပရိတျသတျကွီးရေ စောခရဈ မူးလာ ဟာ Myanmar Idol Season(4) အဆိုပွိုငျပှဲမှာ အသံခြိုခြို မကျြနှာခြို ခြိုလေးနဲ့ ပရိတျသတျ‌တှရေဲ့ အခဈြကို ဖမျးစား ထား ခဲ့သူတဈ ဦးဖွဈပါတ ယျ။သူ့ရဲ့ အဆိုပွိုငျပှဲ ခရီးစဉျတောကျ‌လြှောကျမှာလညျး ပြျောပြျောနတေတျတဲ့အကငျြ့ကွောငျ့ ပရိတျသတျမြားရဲ့ ခဈြခငျအားေ ပးမှုကိုပွညျ့အဝ ရရှိထားခဲ့ပွီး အနုပညာလုပျငနျးမြား ဆကျလကျလု ပျကိုငျခြိနျမှာလညျး ပရိ တျသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို အဆကျမပွ တျရရှိခဲ့ တာဖွဈပါတယျ။
သူဟာ မွနျမာနိုငျ ငံကို အာဏာထိနျး ခြုပျခံခဲ့ရတဲ့ ဖဖေျောဝါရီ( ၁) ရကျနမှေ့ စတငျကာ ပွညျသူ နှငျ့ တဈသားတညျးရပျတညျခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦး လညျးဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ သူဟာ လှတျမွောကျနယျမွေ တဈခုကိုရော ကျရှိနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ယမနျ့နေ့ အောကျတိုဘာ ( ၂၀ ) သီတငျးကြှတျ လပွညျ့ညမှာတော့ သူဟာ ရဲဘျောတှေ နဲ့ အတူ မီးပုံပြံလှတျတ ငျနခေဲ့ပုံကို ဝမျးသာ အားရ ပရိတျသတျ ထံပွောပွ လာပါတယျ။ မီးပုံလှတျတ ငျရာမှဦ တဈခါမှ သူ့အဝတျ ကိုထညျ့ပွီး မလှတျတငျ ခဲ့ဖူးပမေယျ့ ယခုတောထဲရောကျတဲ့ အခြိနျမှာတော့ အဝတျကိုပါထ ညျ့ပွီး မီးပုံးလှတျတငျ ဖူးပွီဖွဈကွောငျး ကိုလညျး အရှနျးဖောကျ ကာပွောဆိုထားပါသေးတယျ။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ စောခရစ် မူးလာ ဟာ Myanmar Idol Season(4) အဆိုပြိုင်ပွဲမှာ အသံချိုချို မျက်နှာချို ချိုလေးနဲ့ ပရိတ်သတ်‌တွေရဲ့ အချစ်ကို ဖမ်းစား ထား ခဲ့သူတစ် ဦးဖြစ်ပါတ ယ်။သူ့ရဲ့ အဆိုပြိုင်ပွဲ ခရီးစဉ်တောက်‌လျှောက်မှာလည်း ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့အကျင့်ကြောင့် ပရိတ်သတ်များရဲ့ ချစ်ခင်အားေ ပးမှုကိုပြည့်အဝ ရရှိထားခဲ့ပြီး အနုပညာလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လု ပ်ကိုင်ချိန်မှာလည်း ပရိ တ်သတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အဆက်မပြ တ်ရရှိခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ မြန်မာနိုင် ငံကို အာဏာထိန်း ချုပ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ( ၁) ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ပြည်သူ နှင့် တစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦး လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ သူဟာ လွတ်မြောက်နယ်မြေ တစ်ခုကိုရော က်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယမန့်နေ့ အောက်တိုဘာ ( ၂၀ ) သီတင်းကျွတ် လပြည့်ညမှာတော့ သူဟာ ရဲဘော်တွေ နဲ့ အတူ မီးပုံပျံလွှတ်တ င်နေခဲ့ပုံကို ဝမ်းသာ အားရ ပရိတ်သတ် ထံပြောပြ လာပါတယ်။ မီးပုံလွှတ်တ င်ရာမှဦ တစ်ခါမှ သူ့အဝတ် ကိုထည့်ပြီး မလွှတ်တင် ခဲ့ဖူးပေမယ့် ယခုတောထဲရောက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ အဝတ်ကိုပါထ ည့်ပြီး မီးပုံးလွှတ်တင် ဖူးပြီဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း အရွှန်းဖောက် ကာပြောဆိုထားပါသေးတယ်။
နောက်ထပ်ကြေလွင့်သွားပြန်တဲ့ အနုပညာကြယ်တစ်ပွင့် ကိုကျော်စိုး ရဲ့နောက်ဆုံးပုံရိပ်များ…..
သူမရဲ့ မွေးနေ့မှာချစ်သူလေးနဲ့အတူ ကမ်းခြေမှာဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ပုံလေးကို တင်ပေးလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် မေမီကိုကို……
ငယ်ဘဝက ပုံလေးတွေနဲ့အတူ ချစ်စရာသမီးလေးမွေးနေ့ကို ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ မေမေခိုင်သင်းကြည်……
သူမရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကျတိုင်း အမြဲတမ်း အားပေးနေတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းကိုပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု…….
ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ မိတ်ကပ် မထက်ရဲ့ အဘိုး….
အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဆရာဖြစ်သူ ဦးကျော်သက်လင်းကို အရမ်းလေးစားမိကြောင်းပြောပြလာတဲ့ မြနှင်းရည်လွင်…